Dr. Abiyyi Ahmad hoogganoonni paartilee mormitootaa sagantaa muudama isaa irratti akka argamaniif affeere - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dr. Abiyyi Ahmad hoogganoonni paartilee mormitootaa sagantaa muudama isaa irratti akka argamaniif...
Dr. Abiyyi Ahmad hoogganoonni paartilee mormitootaa sagantaa muudama isaa irratti akka argamaniif affeere
Dr. Abiyyi Ahmad hoogganoonni paartilee mormitootaa sagantaa muudama isaa Ebla 2, 2018 irratti akka argamaniif affeerraa godhe. Hoogganoota paartiile mormitootaa hunda xalayaan affaaeera dhaqqabuun beekameera. Hoogganoonni paartilee mormitootaa paarlaamaa biyyattiitti argamuudhaan sagantaa aangoo wolitti dabarsuu ni taajjabu. Kana males, hoogganoonni paartilee mormitootaa sagantaa irbaataa gara-galgalaa masaraa mootummaatti geggeeffamu irrattis ni hirmaatu.
Affeerraan akkanaa seenaa EPRDF woggaa 27 keessatti isa jalqabaati. Dr Abiyyi daandii haromsaa dhugaa qabachuu fi fedhiin biyyattii jijjiiruu jiraachuuf kuni agarsiisa tokko, jedhu taajjabdoonni.
Lammaa Magarsaa Lammaa magarsaa
Previous articlePaarlaamaan Sanbata Dr Abiyyi Ahmadiin Muummicha Ministeraa godhee filata
Next articleMuummichi Ministeraa, Dr Abiyyi Ahmad, rakkoo gama dimokraasii, haqaa fi wolqixxummaan mudhatu furuuf ciminaan ni hojjadha jedha